I-Semalt SEO Agency: Ukugxila Ekubonakaleni futhi Hhayi nje ku-Blue Links
Uma kukhulunywa nge-SEO, inhloso yokuqala yawo wonke amawebhusayithi ukufinyelela phezulu. Emuva ezinsukwini zakudala, bekuqonde ukungena ezingxenyeni ezi-10 eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ngenkathi inhloso "ephezulu yeGoogle" ayikashintshi kakhulu kubantu, ukuthi uyifinyelela kanjani isishintshe kakhulu.
Ngaphambi kokuthi sijule kakhulu, kubalulekile ukuqonda impikiswano ebilokhu yenzeka isikhashana ku-SEO. Ingabe lezi zixhumanisi eziyishumi eziluhlaza zifile? Ngezici ezintsha ze-SEO eziphuma unyaka nonyaka, impendulo yalo mbuzo ingahle incike kunhloso yakho. Sizongena ngemininingwane eminingi engezansi.
Yini ama-Blue Links?
Uma uzwa uchwepheshe wezentengiso ekhuluma ngezixhumanisi eziyishumi eziluhlaza, bakhuluma ngemiphumela eyishumi ephezulu kuGoogle. Ngokuya ocwaningweni, ikhasi lokuqala le-Google lithatha amaphesenti angama-75 kuye kwangama-95 omgwaqo. Ukufinyelela kulezo zixhumanisi eziluhlaza okwesibhakabhaka kubaluleke kakhulu empumelelweni ku-Google. Kungcono kakhulu ukwahlukanisa izingxenye ezintathu kwezine zephayi nabantu abayishumi kunokuba usike ingxenye yesine.
Izixhumanisi ezi-Blue, lapho kukhulunywa ngazo ngokwazo, kungenye indlela yokusho imiphumela yokucinga. Uma ubheka ikhasi lemiphumela yenjini yokusesha (i-SERP), izixhumanisi eziluhlaza okwesibhakabhaka azifaki imiphumela ekhokhelwayo, izingxenye zolwazi, namazwibela afakiwe owabona phezulu noma eduze phezulu.
Ngabe ama-Blue Links awasizi Ukuphishekelwa ku-SEO Yesimanje?
Njengoba unikezwe ukuthi imiphumela eyishumi yokuqala ku-Google isathola ithrafikhi enkulu, kusekuningi ukusetshenziswa kokuyixosha. Lezi zingcitshi ezifakiwe ekuqaleni zithathe indawo enkulu yokuthengiswa kwezakhiwo kwiphepha langaphambili. Indlela enhle yokusingatha lezi izinto hhayi ukuzigwema, kepha ukuzisebenzisa njengoba kuhlosiwe.
Ngingena Kanjani endaweni Ekhonjisiwe Yezimpunzi?
Labo abakwaziyo ukungena endaweni efakiwe ye-snippet bazophinda kabili isilinganiso sabo sokuchofoza. Inhloso yakho ukungena kuleyo ndawo. Cishe njenganoma iyiphi iphrojekthi ye-SEO, umbuzo ungathola ubunzima. Noma kunjalo, kunezindlela ezithile ezinhle kakhulu ze-SEO okufanele uzigcine engqondweni ezizokusiza.
Abakhandi be-Google, noma i-AI esola amawebhusayithi ukuze bawenze kahle, bakhethe uma kuziwa ekufomeni. Ngokubuyekezwa kwendlela engena kulezi zingxenye, uzoba nombono omuhle wokuthi ungaqala kanjani. Ake sithathe isibonelo: indlela yokubhaka ikhekhe.
Sizodlula ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamazwibela kamuva, kepha lesi sibonelo sisinikeza izindlela zokupheka kanye nesigaba se-Q & A. Ukuchofoza noma yikuphi kwalokhu kuzoveza uhlu olunezinombolo. Uhlu lwazo olunezinombolo alunazo izikhala zokusebenzisa ngokunenzuzo kufomathi yokufunda ye-Google. Indlela yabo yemisho iqondile futhi kulula ukuyifunda. Ukuskrola phansi kuzokwembula ezinye izibonelo. Lokhu kufaka amavidiyo, uhlu olunamachaphazelo, nezigaba ezinde.
Uzoqaphela ukuthi amanye ala mawebhusayithi aqine kakhulu ekusebenziseni izihloko zawo. Ngokusebenzisa amathegi akho we-H1, H2, ne-H3 njengendlela yokuhlunga yemvelo, ulandela izindlela ezinhle kakhulu ze-SEO. I-Google kungenzeka ikhethe isigaba samagama angama-50 ngaphansi kwesihloko se-H3 esenza lula impendulo.
Izithonjana ezifakiwe ezenzelwe ukuphendula imibuzo. Le mibuzo yizinkinga ezijwayelekile i-Google ezikhombe ngaphakathi kwe-niche. Le yimibuzo ongayiphendula.
Uma usebenzisa i-butcher edolobheni elikhulu, indlela enhle abantu abangakuthola ngayo ukushaya i-SEO. Ngokuheha abantu kuwebhusayithi yakho, ufuna ukunikela ngochungechunge lwezihloko zendlela yokwenza iwundlu kahle. Ngemuva kokucinga izinkundla zokuphathelene nenyama, izindlela zokupheka ku-inthanethi, nemiphumela ejwayelekile ye-google, uthola uchungechunge lwemibuzo ongayiphendula.
Kuhle ukuqonda ukuthi ikhasimende lingayibuza kanjani imibuzo. Leliqhinga lizoletha abantu kuwe. Ukuba “nokusikeka okuhle edolobheni” kuyisu elingahle lasebenza eminyakeni engamashumi amane edlule. Ukuthola abathengi namuhla, kufanele sizisungule njengolwazi oluthembekile kulokhu. I-blog yindlela elula yokwenza lokhu.
Beka I-Stuff Yakho Esihle Phambili
Uma ubheka amaphephandaba nezikhangiso eminyakeni eyikhulu edlule, uzophawula itimu ejwayelekile. Abantu abaqeqeshwa kulezi zindawo bazokwazisa ngento ebizwa ngokuthi yi- reverse piramidi. Lesi sitayela se-piramidi esinezifiso yilokho abalobi bezindaba abasebenzisa lapho befaka okuqukethwe kwabo okuhle kunhlokweni. Lapho sisebenzisa lokhu kuqonda kumakhanda ethu we-H2 ne-H3, iGoogle izokubona lokhu.
Kungenzeka ukuthi ucabanga ukuthi umsebenzi wakho njengomnikazi webhizinisi uwukubagcina becabanga ngomkhiqizo wakho isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Kepha ubude besikhathi sokunakwa komuntu yimizuzwana eyisishiyagalombili. Uma isihloko sakho singabakhohlisi, usuvele ubalahlile.
Uma usebenzisa lo mbhalo kumabhulogi akho, ngeke ubone uchungechunge lwamabhulogi alayisha ngaphambili yonke imininingwane ewusizo. Uzobona ukuthi isihloko ngasinye sisebenza njengombuzo, esilandela ngokushesha impendulo. Indlela yabo ingaba ukufafaza imininingwane elusizo ukuholela empendulweni. Akunandaba, uma ugcina abantu belinde isikhathi eside kakhulu, bayojabula ukuthola lelo khambi ngokushesha kwenye indawo.
Ngabe uSemalt Ungangisiza Kanjani ngalokhu?
Iqembu likaSemalt labachwepheshe liyazi ngalezi zinkinga. Ngokuziqeqesha ngemikhuba emihle kakhulu ye-SEO, uSemalt uzosebenzisa la mathuba ngokuqondisa amagama asemqoka. Ngokufaka la magama angukhiye kulezo izifinyezo ezifakiwe, ubeka phakathi kwabaphezulu ekusesheni okuthile.
Kunamagama agqamile amabhizinisi avame ukungawanaki. Ngokuhlobanisa lawa magama angukhiye neziqeshana ezifakiwe, ungazithola usesimweni esingcono sokukleliswa kwamagama angukhiye amaningi wokuncintisana. Xoxa nochwepheshe we-SEO namhlanje ukuze wakhe uhlelo lokusebenza ukuze likuyise phezulu kweGoogle.
Yiziphi Izinhlobo Ezahlukile Zezimpophoma ezifakiwe?
Lapho wenza okuqukethwe okuhle kube ngama-snippets afakiwe, kubalulekile ukuqaphela ukuthi kunezinketho ezimbili zemidiya ezivelele: uhlobo nevidiyo. Ubuningi balokho esizokufunda kulesi sigaba kusekwe ngamagama, kepha ividiyo iyisiteshi okufanele ucabange ukungeza kulitshe yakho yemidiya. Ividiyo iyinsizakalo enikezwa nguSemalt. Sizodlula ezindaweni ezine.
Uhlu olunamachashazi noma olunenombolo
Imithombo yezindaba ekhulayo
Akuholeli kuwebhusayithi yakho
Dinga isipiliyoni sokuhlela
Ukutshala imali ephezulu phambili
UGoogle, ongumnikazi we-YouTube, uthanda ukusekela umkhiqizo wabo. Ngenxa yalokhu, amazwibela e-YouTube ayindlela enhle yokuqondisa abantu. Lawa mazwibela akaholeli abantu esizeni sakho, kepha abaholele “emgqonyeni” ongakwazi ukubuyela kusayithi lakho. Leli cebo kungenzeka lingabi yinkinga, kepha uthambekele ekulahlekelweni ngabantu lapho uya phansi kulomsebenzi.
Ukuhlelwa kwevidiyo futhi inqubo eyinkimbinkimbi enezinga eliphakeme lokutshala imali phambili. Uzodinga ukuthola indawo yobungcweti ngaphakathi kwebhizinisi lakho noma indlu yakho. Uzodinga ukufakazela ubufakazi kuleyo ndawo. Umhleli uzodingeka futhi ukuthi aqinisekise ukuthi ukhiqiza okuqukethwe okuseqophelweni eliphezulu. Kuyithuba elihle kakhulu, kepha elingakwesokunxele kubantu abanamakhono.
Ingcezu enkulu yolwazi
Ingabukeka kangcono kuGoogle kunekhasi lakho
Awunakho ukukhanga ngokomzwelo
Ama-snippets etafula ayizinto ezikhangayo, eziqhutshwa idatha ezihlukile. Lokhu “kwehlukile” kuvela ngokuthi iningi lamawebhusayithi alikwazi ukukufaka kahle lokhu. Abaningi bacabanga ukuthi kufanele ubeke itafula esizeni sakho ukuze usizakale. Kepha noma iyiphi idatha efakwa kumakholomu nemigqa ingafanelana inkokhelo.
Izizathu eziningi zokuthi awuboni amatafula ukukhanga kwabo okuntulayo. Abanye abantu abathandi ukubona isethi yedatha. Futhi, i-HTML yokudala lezi idinga ucwaningo oluncane. Labo abangenalo ulwazi ngesihloko kungenzeka bangafuni ukulandela le nketho.
Inikeza imininingwane eminingi
Ungafaka i-Call to Action (CTA)
Okumnandi kakhulu ukufunda
Iphinifa ngobude bombhalo
Iziqeshana zezigaba yilezo eziqukethe umbhalo oqinile wombhalo. Bajwayele ukuba ngaphansi nje kwe-H3 njengempendulo yombuzo owethulwe esihlokweni. Inikeza imininingwane eminingi futhi inikeza ithuba elihle kakhulu lokufaka i-CTA.
Lezi zikhanga kakhulu abafundi abangazisebenzisa. Ngokubanika isikhathi sokunaka sesishiyagalombili esishiwoyo okukhulunywe ngaso ekuqaleni, ungalahlekelwa yisigaba. Futhi, iGoogle ibonakala inenkinga efanayo. Bangakwazi ukunquma ukususa umbhalo uma ushintsho ku-algorithm yabo lunquma ukuthi yinde kakhulu.
Kungaba nomthelela omkhulu
Kulula ukuqonda isithombe-sinyathelo ngesinyathelo
Kuqukethe imininingwane ekhawulelwe
Amagagama ohlu lwamagama anezinombolo eziningi nezinenombolo ukhetho lwesibili oluvame kakhulu onalo. Bafika baqonde ephuzwini, bakunikeze uhlu lwezinketho ezifuna ukuphendula imibuzo ebhalwe esihlokweni. Yindlela enhle kakhulu yokuhlinzeka ngemiyalo yezinyathelo nezinyathelo. Lesi sitayela semfundo sikhanga kakhulu sokuhlinzeka ngesisombululo esisheshayo.
Ama-Cons aqhamuka nokukhetha uhlu olunezinombolo noma ezinezinhlamvu zihlobene nesikhala. Ngenkathi izinhlamvu noma izinombolo zinethonya elithile, ukubona lezi zinhlu kuzoqala ukuba yindawo evamile. Futhi, izinhlamvu noma izinombolo zinendawo encane ekubhekaneni nezinkinga ezinzima.
Izixhumanisi eziyishumi eziluhlaza okwesibhakabhaka esaziyo ukuthi zingaphansi kohlu, amamephu, amavidiyo, nezikhathi ze-Q&A phezulu kwenjini yokusesha. Ngenkathi ukukleliswa kwabayishumi abaphezulu kusabalulekile empumelelweni, ukushaya lezi zingcweti ezifakiwe kubhekwa njengokubaluleke kakhulu ekwandeni kokubonakala. Uma umuntu ezama ukuthatha inombolo yakho yokuqala nge-video noma isigaba, umsebenzi wakho ukusebenzela lezi izifinyezo.
Ngokubona izinto ezishiwo ngenhla, uzokwazi ukuqondisa iziteshi ezimbili zemithombo yezindaba zokuthuthukisa amakhono akho ukuze ungene kulezi zingxoxo ezifakiwe. Kuhlanganiswe nethimba likaSemalt labachwepheshe be-SEO, inhloso yakho yokufika phezulu kweGoogle kungafinyeleleka. Ngeminye imininingwane, sicela uthinte uchwepheshe namuhla.